MUXUU ILAAHAY UGU BAAQAY QOFKA DIINTIISA LA HIJROODA EE GAALO KALA CARARA?
Ilaahay wuxuu ku yiri Kitaabkiisa kariimka ah:
1) Qofkii diintiisa la hijrooda wuxuu dhulka Alle ka helayaa meel uu ka dego, kuna barwaaqoob. Wuxuuna ciilayaa gaalada oo arkaya sida Muslimku uga deeqtooma.
2) Qofkii dhinta isagoo Hijrada ku dhex jira, diintisa darteed, wuxuu Alle u ballaan qaaday janno iyo ajar badan.
3) Wuxuu Alle sheegay inuu qofkii diintiisa doorta oo la carara janno gelinayo.
4) Wuxuu Alle sheegay inuu Risiq badan u furayo qofka diintiisa la hijrooda, tusaale ahaanna wuxuu ugu soo qaaday: Immisaa jira cayayaan yar yar oo an awood lahayn Allena irsaaqo, maadigaa ka liita.
5) Wuxuu Ilaahay sheegay in qofkii Alle iyo diintiisa u hijrooda, in Alle adduunyada nolol fiican ku siinayo, tan aakhirona kasii fiicantahay, oo meel wanaagsanna la gelinayo.
6) Wuxuu Ilaahay tusaale marar badan quraanka ugu soo qaaday Nebi Ibraahim CS markuu diintiisa la hijroodey inuu wiilal Nebiyaa siiyey.
7) Nebi Muuse CS markuu xoogsadey wuxuu Alle ka magan galay inuu gaalo mujrimiina dhabar iyo xoog ku kaalmeeyo. Allena waa ka magan geliyey.
8) Markuu Nabi Muuse CS u kicitimay xagga Madyan wuxuu Alle weydiistey inuu ku hanuuniyo jidka toosan Allena waa ku hanuuniyey, wuxuuna ugu abaal gudey reer iyo la deganaasho nin saalixa..................... DHAMMAAD
XUSUUS: Walaalayaal ma idin ku jiraa qofka raganimo iyo iimaan leh ee ka tagaaya dalalka gaalo ama hadda ku haminaaya inuu ka tago, oo Ilaahey tala saaranaaya siduu u Nebi Ibraahiim ilaahiisa u tala saartay, oo diintiisa la cararaaya?
SOMALI: "Waxaan Kuu Dardaarmayaa Ku Dhaqanka Diinta Islaamka oo ah Jidka Badbaadada Aduun iyo Aakhiro"
"I remain you that we should strive in our practice of Islam which gives us success in this life and the next"